(Emelitere ikpeazụ On: 01/05/2021)
Echiche kachasị ewu ewu nke Castle Neuschwanstein sitere na akwa mmiri Mary. Otú ọ dị, ọ na-akawanye mma juru na ọ fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume snap a picture si ama ele ihe anya. Ya mere, ị kwesịrị ị na-arịgo ugwu ma gafere echiche Marienbrucke. Echiche kachasị mma na Germany bụ ụzọ zig-zag, site n'elu ikpo okwu.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Ọtụtụ Kasị Mma Echiche Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)